ताइपेई सँगको जितपछि यस्तो भन्छन् किरण, अन्जन र पुजन ! – Yuwa Aawaj
ताइपेई सँगको जितपछि यस्तो भन्छन् किरण, अन्जन र पुजन !
जेठ २३, २०७८ आइतबार 222
काठमाडौं: फिफा विश्वकप २०२२ कतार तथा एएफसी एसियन कप २०२३ चीनको संयुक्त छनोटको दोस्रो चरणमा नेपालले बिहीबार दोस्रो जित हात पा¥र्‍यो।
समूह ‘बी’ अन्तर्गत कुवेत सिटीमा भएको खेलमा नेपालले चाइनिज ताइपेईलाई २-० गोलले पराजित ग¥र्‍यो। नेपालको जितमा अन्जन विष्ट र नवयुग श्रेष्ठले गोल गरे। जितपछि नेपालले समूहमा ६ अंक जोड्दै एसियन कपको तेस्रो
चरणमा सिधैं पुग्ने सम्भावना जीवितै राखेको छ। समूहमा अब नेपालले जोर्डनसँग जेठ २४ गते र अस्ट्रेलियासँग जेठ २८ गते खेल्नेछ। ताइपेईविरु’द्ध जित हात पारेपछि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले कप्तान तथा गोलकिपर किरणकुमार लिम्बु, फरवार्ड अन्जन विष्ट र मिड’फिल्डर पुजन उपरकोटीसँग प्रतिक्रिया लिएको छ। पढ्नुहोस् उनीहरूको प्रतिक्रिया :-
अन्जन विष्ट (फरवार्ड) ।
हिजो जित्ने लक्ष्य थियो। प्रशिक्षकले बनाएको रणनीतिअनुसार खेल्न पनि सफल भयौं। मैदान छिरेपछि जित्नका लागि खेल्छौं। जित्ने हो भने गोल त हान्नु पर्छ। हिजो मैले हाने अरु बेला अरुले हान्छ।
तर मुख्य लक्ष्य भनेको जित्ने थियो, हामी जित्न सफल भएका छौं। प्रशिक्षकले जे भन्नु हुन्छ हामी सबैले त्यहीँ ग¥र्‍यौं। अब जोर्डन र अस्ट्रेलिया राम्रा टिम हुन्। त्यसका लागि हामी स्टेप बाइ स्टेप गइरहेका छौं। हामी अन्त्यसम्म लड्नेछौं।
पुजन उपरकोटी (मिडफिल्डर) ।
हिजोको खेल एकदमै राम्रो भयो। हामीले जित निकाल्न सफल भयौं। टिमले एकदम राम्रो मिहिनेत ग¥र्‍यो। टिम भावना राम्रो भइरहेको छ। हाम्रो खेल्ने प्रणाली पनि नयाँ छ। आगामी खेल अलि बलियो टिमविरु’द्ध छ। हुन त सबै टिम बलिया नै हुन्। जोर्डन र अस्ट्रेलियासँग केन्द्रीत भएर राम्रो गर्ने अपेक्षा गरेको छु।
किरणकुमार लिम्बु (गोलकिपर-कप्तान) ।
नयाँ प्रशिक्षक आएपछि हामीले नयाँ फुटबल अनुभव गर्न पाएका छौं। सबै खेलाडीको आत्मविश्वास एकदमै बढेको जस्तो लाग्छ। प्रशिक्षकले नयाँ वातावरण बनाउनु भएको छ।
नयाँ खेलाडीले पनि इराकसँगको मैत्रीपू’र्ण खेलमा राम्रो खेलेका थिए। हिजोको खेलमा त्यो निरन्तरता भयो। हामी खुसी छौं।
तर अझै पुगेको छैन। हामीसँग अब दुई खेल बाँकी छ। ती खेलका लागि हामी अगाडि बन्नेछौं।
Prevयती धेरै खुसी रमेश प्रसाई र नन्दा को छोरोको आगमन बधाई नदिनेलाई यस्तो सन्देश ।
Nextगर्भवती नर्सले संसार छाडिन् अन्तिम अवस्थामा रुदै रेकर्ड गराएको भिडियोले सबैलाई रुवायो !(भिडियो सहित)
नेपालको शानदार जित भएकै दिन भारतले भने कतारसामु धुडा टेक्यो ।
नागरिकता अध्यादेश वि’रुद्ध मु,द्धा ‘हेर्दाहेर्दै’मा !
७. के मास्क धोएर लाउन मिल्छ ? दिनदिनै फेर्नुपर्छ कि एउटै लगाइरहे हुन्छ ? तपाई पनि थाहा पाउनुहोस । (1089)